> Resource > Ladnaansho > Siduu u USB PQI Flash Drive Recovery
Ma u baahan tahay USB PQI Flash Drive Data Recovery Solutions!
Waxaan kaliya qaar ka mid ah tirtiray files document ka 2GB PQI USB flash drive. Waxaan weydiiyay qaar ka mid ah saaxiibadeey, waxaana la ii sheegay in aan joojiyo isticmaalka flash iyo yimaadaan si ay internetka si aad u hesho qaar ka mid ah xal USB PQI kabashada flash drive. , Sidaas waxaa jira wax xal aan dib ugu heli files document ii?
Maxay saaxiibadaa aad u sheegay gebi ahaanba waa xaq. Qirid aasaasiga ah oo ku saabsan khasaaraha xogta waa in files lumay ama la tirtiro aan si dhab ah ku qoysay oo ka qalab aad si joogto ah. Waxay kaliya noqon geli karin. Kaliya marka ay xogta cusub degan meel ay loo isticmaalo in lagu been ka Weligoodba way baabi'i doontaa. Taas macnaheedu waxa weeye, in aad u baahan tahay inaad marka hore u sii qalab aad la isticmaalin ka dibna eegto loogu tala galay barnaamijyada soo kabashada flash drive USB PQI ah si ay u xaliyaan dhibaatada. Nasiib wanaag, Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waxaa laga heli karaa haatan. Gaar ah oo loogu tala galay software Tani waa awoodaa inuu ka soo kabsado xogta ka PQI flash USB drive, ma ahan xogta la waayay tirtirka, jeermiska fayraska, Baadi nidaamka ama sababo kale. By u isticmaaleeysay in ay baarista PQI flash USB drive, waxaad si fudud u hanato karaa noocyo kala duwan oo nooc file ka PQI flash USB drive, oo ay ku jiraan sawirrada, document files, videos, files audio, iwm
Version A tijaabo ah Wondershare Data Recovery aad heli karto hadda. Version maxkamad kuu oggolaanayaa in aad baarista USB flash PQI drive in lagu hubiyo sida badan files aad dib u soo ceshano karo.
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Xogta laga USB PQI Flash Drive
Tallaabada 1 Geli aad USB flash PQI drive la your computer, ka dibna lagu daahfuri Wondershare Data Recovery. Waxaad arki doonaa interface bilowga ah sida hoos ku image muujinaya. Halkan kaliya aad u baahan inay guji "Next" si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka badalan karaa in "Mode Standard", taas oo ah wax yar ka duwan hab Wizard.
Tallaabada 2 Markaas waxaad u baahan tahay in ay doortaan noocyada file aad rabto in aad ka soo kabsado aad USB flash PQI drive oo guji "Next" in ay sii wadaan.
Notes: Haddii aadan haysan nooc gaar ah file dib u soo ceshano, waxaad dooran kartaa "Dhammaan noocyada file".
Tallaabada 3 Halkan aad doonaysid in aad doorato adag disk in faylasha aad ayaa laga badiyay ka. Si aad u soo ceshano xogta ka PQI flash USB drive, fadlan dooro warqad drive ah oo guji "Next".
Tallaabada 4 Hadda barnaamijka bilaabi doonaan in ay baarista USB flash PQi drive for files lumay. Guji "Next" ka dibna barnaamijka bilaabi doonaa iskaanka.
Fiiro gaar ah: Sida aad ka arki kartaa suuqa kala, waxaa jira labo ikhtiyaar scan la sharaxaada faahfaahsan oo la heli karo. Waxaad ka arki kartaa sharaxaada si taxadar leh iyo go'aan loo isticmaalo ama aan.
Talaabada 5 Waxaad awoodi doontaa in aad dib u soo ceshano xogta ka USB flash PQI drive sawirka kadib. Dhammaan files helay lagu soo bandhigi doonaa qaybaha dhanka bidix ee suuqa kala. Fadlan si taxadar leh u eegto magaca faylka si aad u hubiso in aad files doonayo ayaa laga helay ama aan.
Markaasay aad sax kartaa faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.